Sei Makasitoma Ezvinhu Zvakapakurwa Zvemakambani Achishandisa Big Dhata?
Chitatu, June 12, 2019 Chitatu, June 12, 2019 Douglas Karr
Dai paive neindasitiri imwe uko toni yedata yaitorwa nguva dzese, iri muindasitiri yeVatengi Yakapakurwa Midziyo (CPG). Makambani eCPG anoziva kuti Big Data yakakosha, asi ivo vachiri kuitambira mukushanda kwavo kwezuva nezuva. Ndezvipi Zvinhu zveVatengi Zvakapakatwa? Zvinhu zvevatengi zvakapakurwa (CPG) zvinhu zvinoshandiswa zuva nezuva neavhareji vatengi zvinoda kutsiva kana kudzoreredza, senge chikafu, zvinwiwa, mbatya, fodya, makeup uye imba.